OPPO Watch | OPPO Myanmar
Wear OS by Google တွင် လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား ပိုမိုလွယ်ကူအဆင်ပြေအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များပါဝင်ပြီး အချိန်ပိုအောင် ဒီဇိုင်းဆွဲပေးထားပါသည်။ Google Play ရှိ ရာပေါင်းများစွာသော app များကို မွှေနှောက်ရှာဖွေပြီး လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပိုမိုမြန်ဆန်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ သီချင်းဖွင့်ခြင်း၊ စာတိုများအား ပြန်ဖြေခြင်းနှင့် သတင်းခေါင်းကြီးပိုင်းများ ဖတ်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ Google Pay အသုံးပြု ငွေပေးချေခြင်း၊ Google Assistant ၏ ဖြေကြားချက်များရယူခြင်း၊ Google Fit ကို အသုံးပြု၍ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ ခြေရာခံစောင့်ကြည့်ပေးခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက် : စာတိုပြန်လည် ဖြေကြားနိုင်မှုကို Android ဖုန်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော OPPO လက်ပတ်နာရီတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လှုပ်ရှားသွားလာမှု တစ်ခုခုပြုလုပ်စဉ် OPPO လက်ပတ်နာရီဖြင့် သီချင်းဖွင့်ခြင်း သို့မဟုတ် သီချင်းဒေါင်းလုတ်ဆွဲခြင်းများကို အရှိန်မပြတ်ဘဲ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
1. သီချင်းဖွင့်ခြင်းအတွက် LTE နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း (LTE ဗားရှင်းအတွက်သာ) သို့မဟုတ် Wi-Fi®/ Bluetooth တို့ကို အသုံးပြု၍ ကြိုးဖြင့် ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
2. သီချင်း app များနှင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများသည် နယ်မြေဒေသလိုက်၍ ကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါသည်။
3. ကြိုးမဲ့နားကြပ်များကို သီးခြားရောင်းချပါသည်။
အချိန်များကို အကောင်းဆုံး အသုံးချနိုင်ခြင်း
လျှင်မြန်လွယ်ကူမှုရှိသော ငွေပေးချေမှုများအတွက် နာရီ၏ home မှတဆင့် ငွေလွဲမှုများကို စတင်နိုင်ပါသည်။ Google Play မှ ရာပေါင်းများစွာသော apps များကို ရယူပြီး Wear OS by Google™ တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဘယ်ကိုသွားသွား အမြဲအသင့်ရှိနေမည့် အဖော်မွန်
ရာသီဥတု၏ update အချက်အလက်များ၊ ပြက္ခဒိန်မှ အသိပေးချက်များ၊ ဘာသာပြန်များ အစရှိတဲ့ အကူအညီကို Google မှ ရယူလိုက်ပါ။
1. Google Assistant ကို အချို့ဒေသများနှင့် အချို့သော ဘာသာစကားများတွင် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
2. Google Assistant ၏ လုပ်ဆောင်မှု အများစုအတွက် LTE ၊ Wi-Fi သို့မဟုတ် ဖုန်းနှင့် Bluetooth ချိတ်ဆက်အသုံးပြုပေးရမည်ဖြစ်သည်။
ပုံစံမျိုးစုံ ရရှိနိုင်သော ရုပ်ထင်မှန်သား
လက်ပတ်နာရီမျက်နှာပြင်ကို ကျဉ်းကျဉ်းလေးသာရှိသည်ဟု ခံစားနေရပါသလား။ OPPO လက်ပတ်နာရီသည် အထက်တန်းကျကျ ခန့်ခန့်ညားညားရှိသည့် အသွင်သာမက၊ ပုံစံပြောင်းလဲပေးနိုင်သော နှစ်ဖက်ခုံးရုပ်ထင်မှန်သား ပါဝင်သဖြင့် မျက်နှာပြင်ကို ပိုမိုမြင်နိုင်ပြီး ကောင်းမွန်မှုရှိပါသည်။ ဒိုင်ခွက်ပတ်ချာလည်ရှိ 3D အခုံးဒီဇိုင်းက နာရီကို အရှေ့အနောက်ပါ လှပခန့်ညားစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
DCI-P3 ရောင်စဉ် အစအဆုံး
OPPO လက်ပတ်နာရီ 46mm (Wi-Fi ဗားရှင်း) တွင် 1.91 လက်မရှိသော ပြောင်းရွေ့နိုင်သည့် AMOLED နှစ်ဖက်ခုံးမျက်နှာပြင်နှင့် 326 PPI ပါရှိပါသည်။ OPPO လက်ပတ်နာရီ 41mm (Wi-Fi) တွင် 1.6 လက်မရှိသော ပုံစံပြောင်းလဲ၍မရနိုင်သော AMOLED နှစ်ဖက်ခုံး မျက်နှာပြင်နှင့် 301 PPI ပါရှိပါသည်။
AI နည်းပညာ အသုံးပြု၍
လက်ပတ်နာရီကို ထူးထူးခြားခြား အလှဆင်ပေးလိုပါသလား။ ဝတ်မည့်အဝတ်အစားကို ဖုန်းဖြင့်ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်းဖြင့် OPPO လက်ပတ်နာရီတွင်ပါဝင်သော AI နည်းပညာ၏ စွမ်းဆောင်ချက်ဖြင့် လက်ပတ်နာရီမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အဝတ်အစားဖြင့် လိုက်ဖက်မည့်ပုံစံ ဒီဇိုင်းကို အလိုအလျောက် ပုံဖော်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
OPPO လက်ပတ်နာရီ၏ ဒိုင်ခွက်မျက်နှာပြင်ကို အမြဲတစေ အနုပညာမြောက်အောင် အလှဆင်ပေးနိုင်ပါသည်။ နေ့သစ်တစ်နေ့၏ လန်းဆန်းတက်ကြွမှုများ နိုးထနိုင်ရန်အတွက် သွက်လက်သောဒီဇိုင်းများကို အသုံးပြုထားပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုကို အမြန်ဆောင်ပြီးမြောက်အောင် ဝပ်ဂျစ်များထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက ဖုန်းအတွင်းမှ ဓါတ်ပုံများကိုလည်း ကြွားလုံးထုတ်နိုင်ပါသည်။
သင့်နှင့် ကိုက်ညီမည့် အသွင်ကို ရှာဖွေလိုက်ပါ
သင်နှင့်ကိုက်ညီမည့် OPPO လက်ပတ်နာရီ မော်ဒယ်များကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။
မှတ်ချက် : နေရာဒေသပေါ်မူတည်ပြီး ရရှိနိုင်သော OPPO လက်ပတ်နာရီ မော်ဒယ်များ ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်။
အလူမီနီယံဖြင့် အလှဆင်ပေးထားပြီး အနက်ရောင်နှင့် တောက်ပသည့် ရွှေရောင်များဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ နူးညံ့ချောမွတ်သည့် ရာဘာကြိုးလေးက တနေကုန်ဝတ်ဆင်ထားသည့်တိုင် သက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီး အစိုဓါတ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။
အလူမီနီယံအမှုန်ဒီဇိုင်းဖြင့် အလှဆင်ထားပြီး အမဲရောင်၊ ပန်းရောင်နှင့် ငွေရောင်။ နူးညံ့ချောမွတ်သည့် ရာဘာကြိုးလေးက တနေကုန်ဝတ်ဆင်ထားသည့်တိုင် သက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီး အစိုဓါတ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။
မှတ်ချက် : OPPO လက်ပတ်နာရီ 41mm ၏ အလယ်ဖရိန်သည် တောက်ပြောင်သော အနက်ရောင်ဖြစ်သည်။
သင့်စတိုင်ကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ရန်အတွက် နာရီကြိုးကို အမျိုးမျိုးအပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် ပြင်ပကိစ္စများ သွားရောက်ချိန်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အလုပ်လုပ်ချိန်တို့တွင် အခြေအနေအချိန်အခါနှင့် လိုက်ဖက်မည့် နာရီကြိုးကို ပြောင်းလဲတပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက် : OPPO လက်ပတ်နာရီကြိုးရရှိနိုင်မှုသည် နေရာဒေသပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
Dual-chip Endurance System ဖြင့်
၂၁ ရက်အထိ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Dual-chip Endurance System သည် လက်ပတ်နာရီကို ၃၆ နာရီမှ ၂၁ ရက်အထိ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီခံသည့် endurance modes များဖြစ်သည့် high-performance Qualcomm® Snapdragon Wear™ 3100 နှင့် Ambiq Micro's energy-efficient Apollo3 Wireless SoC နှစ်ခုသည် ဘက်ထရီသက်တမ်းကို ဆွဲဆန့်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခရီးရှည်သွားခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်တွင်ဖြစ်စေ လက်ပါတ်နာရီက အကောင်းဆုံး အကူအညီပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၃၆ နာရီ အထိ 36 အသုံးပြုနိုင်သည်
၂၁ ရက် အထိ 21 အသုံးခံနိုင်သည်
အားကုန်သက်သာစေသည့် Power Saver Mode
/ မှတ်ချက် : OPPO လက်ပတ်နာရီ 46mm (Wi-Fi) ၏ အသုံးပြုပုံနှင့် အားသွင်းပုံတို့ကို အရှေ့တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပါဝါအား 46% ရရှိရန် ၁၅ မိနစ်သာ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ OPPO လက်ပတ်နာရီ 41mm (Wi-Fi) တွင် စမတ် mode ဖြင့် အသုံးပြုပါက ၂၄ နာရီကြာ ဘက်ထရီအားခံပြီး ပါဝါစားသက်သာသည့် Power Saver mode ဖြင့် အသုံးပြုပါက ၁၄ ကြာ အသုံးခံမည်ဖြစ်သည်။ ပါဝါအား ၃၀% ရရှိရန် ၁၅ မိနစ်သာ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
လက်ပတ်နာရီအတွက် အလျှင်အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် VOOC Flash Charging : ၁၅ မိနစ် အားသွင်းရုံဖြင့် တနေကုန် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အလျှင်အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် VOOC Flash Charging စနစ်ဖြင့် ၇၅ မိနစ်အတွင်း လက်ပတ်နာရီကို ၀% မှ ၁၀၀% ရောက်ရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်ပတ်နာရီကို တစ်ညကျော် အားမသွင်းမိပါက ၁၅ မိနစ်အားသွင်းခြင်းဖြင့် တနေကုန် အသုံးပြုရန် လုံလောက်သောပါဝါအားကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပါဝါအား ၄၆% ရရှိနိုင်ခြင်း
၇၅ မိနစ် အတွင်း
ပါဝါအား ၁၀၀% ရရှိနိုင်ခြင်း
မှတ်ချက် : OPPO လက်ပတ်နာရီ 46mm ၏ အားသွင်းနိုင်သော အချိန်တွင် အထက်တွင် ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည် (LTE နှင့် Wi-Fi ဗားရှင်းအပါအဝင်)။ OPPO လက်ပတ်နာရီ 41mm (Wi-Fi) အတွက် အားအပြည့်သွင်းရန် ၇၅ မိနစ် လိုအပ်ပြီး ပါဝါအား ၃၀% ပြည့်ရန် ၁၅ မိနစ်လိုအပ်ပါသည်။
လေ့ကျင့်ခန်း ဆောင်ရွက်ချိန်တိုင်း လက်ကောက်ဝတ်တွင် အတူရှိနေမည့်အဖော်မွန်
အားကောင်းသော အာရုံခံစနစ်။ ၅၀ မီတာ ရေစိုဒဏ် ခံနိုင်ခြင်း။
လက်ပတ်နာရီနောက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော အာရုံခံဆမ်ဆာ အကြီး ၅ ခုမှတဆင့် လုပ်ဆောင်မည့်လေ့ကျင့်ခန်းများဖြစ်သော ပြေးခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့် အခြားသော လှုပ်ရှားမှုများအတွက် အာရုံခံပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ GPS + GLONASS မှတဆင့် တည်နေရာလမ်းကြောင်းကို ရှာဖွေပေးနိုင်ပါသည်။ ၅၀ မီတာ ရေစိုဒဏ်ခံနိုင်မှုသည် ရေကူးစဉ် သို့မဟုတ် အချို့သောရာသီဥတုများအတွင်း နာရီကိုအကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက် : OPPO လက်ပတ်နာရီ 46mm (Wi-Fi ဗားရှင်း) သည် ၅၀ မီတာအထိ ရေစိုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ OPPO လက်ပါတ်နာရီ 41mm (Wi-Fi) သည် ၃၀ မီတာအထိ ရေစိုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
အလင်းများသည့် ပါတ်ဝန်းကျင်ကို အာရုံခံပေးနိုင်ခြင်း
ဝင်ရိုးသုံးခုပါဝင်သော အရှိန်မြင့်အာရုံခံဆမ်ဆာ & ဂိုင်ရိုစကုပ်
မြေပြင်သံလိုက်လှိုင်းကို ခြေရာခံနိုင်သော အာရုံခံဆမ်ဆာ
အလင်းတန်းကို အသုံးပြုပြီး နှလုံးခုန်သံကို အာရုံခံနိုင်သော ဆမ်ဆာ
ဖိအားကို အာရုံခံနိုင်သည့် ဘာရိုမက်ထရစ်ဆမ်ဆာ
စိတ်ဖိစီးမှုမရှိ ပေါ့ပါးလွတ်လပ်စွာ ရှာဖွေဖြေရှင်းခြင်း
အမြဲတစေ နည်းလမ်းရှာဖွေဖြေရှင်းနေရပါသလား။ ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။ OPPO လက်ပတ်နာရီတွင် ပြုလုပ်မည့်လေ့ကျင့်ခန်းတိုင်းအတွက် ပိုမိုလွယ်ကူပြီး အချိန်တိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံးရလဒ်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
၅ မိနစ်စာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစား လေ့ကျင့်ခြင်း
၅ မိနစ်စာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားလေ့ကျင့်ခြင်း
အချိန်တိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံးရလဒ်များ ဖန်တီးခြင်း
အချိန်လုနေရသည့် အခိုက်အတန့်များအတွင်းမှာပင် အချိန်တိုအတွင်း အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိအောင် OPPO လက်ပတ်နာရီမှ ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ တနေ့တာအတွင်း ၅ မိနစ်စာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားလေ့ကျင့်ခြင်း လေ့ကျင့်ခန်းများမှ အိပ်ယာထချိန်ပြုလုပ်ရမည့် လေ့ကျင့်ခန်း၊ ခန္ဓာကိုယ် စွမ်းအင်များမြှင့်တင်ပေးသော လေ့ကျင့်ခန်း၊ အနားယူ စိတ်အပန်းပြေစေသည့် လေ့ကျင့်ခန်း၊ အဆီကျလေ့ကျင့်ခန်း၊ အိပ်ယာမဝင်မီ ပြုလုပ်ရမည့်လေ့ကျင့်ခန်းစသဖြင့် မြောက်မြားစွာသော လေ့ကျင့်ခန်းများမှ သင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ကျန်မာရေးကို အမြဲစောင့်ကြပ်ပေးမည့် Google Fit : လိုအပ်ချက်များနှင့်
သင့်ကျန်းမာရေးကို အမြဲစောင့်ကြပ်ဂရုစိုက်ပေးမည့် Google Fit ကို OPPO လက်ပတ်နာရီတွင် ပုံသေထည့်ပေးထားပြီး သင်၏ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်းဆောင်ရွက်မှုများကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ မျက်ခြည်မပြတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုပေးနေမည်ဖြစ်သည်။
OPPO လက်ပတ်နာရီတွင် ပါဝင်သော X ပုံသဏ္ဍာန် လှုပ်ရှားလုပ်ကိုင်မှုများ ပြသသည့် မီတာကိုတစ်ချက်ကြည့်ရုံဖြင့် သင်၏ ပြီးမြောက်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းကို ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ သင့်တနေ့တာခြေလှမ်းများ၊ ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှုပမာဏ၊ အားကစားဆောင်ရွက်သည့်မိနစ်နှင့် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အချိန်ကာလ စသည်ဖြင့် အရောင်လေးမျိုးခွဲ၍ ဘားတန်းပေါ်တွင်ပြသပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
OPPO လက်ပတ်နာရီမှ နှလုံးခုန်သံကို နာရီတိုင်း ခြေရာခံ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုပေးနေမည်ဖြစ်သည်။ အလင်းကိုအသုံးပြု၍ လှုပ်ရှားမှုကို အာရုံခံပေးနိုင်သော အာရုံခံဆမ်ဆာ ၄ ခု တပ်ဆင်ထားသဖြင့် သင်မည်မျှ လှုပ်ရှားမှုပြုသည်ဖြစ်စေ အမှန်ကန်ဆုံးနှင့် အတိကျဆုံးဖြစ်အောင် တိုင်းတာပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တစုံတရာထူးခြားမှုရှိပါက တုန်ခါ၍အချက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
မနက်ခင်း နိုးထသည့်အချိန်တိုင်း OPPO လက်ပတ်နာရီမှ သင်နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်စက်သည့်အချိန်၊ မှေးစက်သည့် အချိန်နှင့် နိုးထသည့် အချိန်များကို တွက်ချက် ဖြည့်စွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
စိတ်ဖိစီးမှုအားလုံးကို ဖြေလျှော့ပစ်နိုင်ဖို့ အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်ခြင်း လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လိုက်ပါလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုကို ရယူပါ။
OPPO လက်ပတ်နာရီမှ ရရှိသော လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို လက်ကိုင်ဖုန်းရှိ Hey Tap ကျန်းမာရေး app ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ပိုမိုရှင်းလင်းသော မြင်ကွင်းများဖြင့် ရှုမြင်နိုင်ပါပြီ။ လက်ပတ်နာရီ၏ မျက်နှာပြင်ကို app အသုံးပြုပြီး စိတ်ကြိုက်စီမံလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Hey Tap health app အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပိုမိုရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှု့နိုင်မည်
OPPO လက်ပတ်နာရီနှင့် ချိတ်ဆက် synchronize ပြုလုပ်ကာ သင်​၏ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဖုန်းရှိ ကျန်းမာရေး app အတွင်းသို့ ထည့်သွင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် app ကို အသုံးပြု၍လက်ပတ်နာရီမျက်နှာပြင်ကို ပြင်ဆင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
* OPPO လက်ပတ်နာရီအတွက် HeyTap ကျန်းမာရေး app ကို OPPO App Market တွင် ဒေါင်းလုတ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
Android 6.0 နှင့်အထက် (Go edition မှလွဲ၍) အသုံးပြုထားသော Android ထုတ်ကုန်များတွင် Google ၏ Wear OS ကို ထောက်ပံ့ထားသည်။ အသုံးပြုနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ platform များနှင့် ‌ဒေသများအပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်သည်။
ပါဝါစားသက်သာစေသည့် Power Saver mode တွင် စာတိုအသိပေးချက်များ ရယူခြင်း၊ အချိန်ကြည့်ခြင်း၊ ခြေလှမ်းအရေအတွက် ခြေရာခံခြင်းနှင့် နှလုံးခုန်သံကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်န်ိုင်ပါသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားခဲ့သော OPPO လက်ပတ်နာရီ၏ အသုံးပြုနိုင်သော ကြာချိန်သည် OPPO စမ်းသပ်ခန်းအတွင်း ပုံမှန်ဘက်ထရီတစ်ခုကို မော်ဒယ်ယူ၍ စမ်းသပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် အသုံးပြုနိုင်သော ဘက်ထရီသက်တမ်းသည် ကွန်ယက် အခြေအနေ၊ အသုံးပြုသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အသုံးပြုသည့် ကြိမ်နှုန်းတို့အပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါသည်။
-	ပုံမှန်ဘက်ထရီတစ်ခုကို မော်ဒယ်ယူ၍ Smart Mode (OPPO လက်ပတ်နာရီ 46mm Wi-Fi ဗားရှင်းနှင့် OPPO လက်ပတ်နာရီ 41mm Wi-Fi ဗားရှင်း) တွင် ထားရှိခြင်း : စက်ရုံမှ ပုံမှန်ထားသည့် setting၊ Bluetooth® နှင့် ဖုန်းချိတ်ဆက်ခြင်း၊ Bluetooth ဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းအတွက် နာရီ ၂၀၊ Wi-Fi ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် ၄ နာရီကြာ၊ Screen ပိတ်၍ GPS အသုံးပြုခြင်းအတွက် ၄၅ မိနစ်ကြာ၊ ဘလူတူနာကြပ်နှင့်ချိတ်ဆက်၍ သီချင်းဖွင့်ခြင်းအတွက် ၃၀ မိနစ်၊ လက်ကောက်ဝတ်ကို လည့်၍နာရီမျက်နှာပြင်ကို ဖွင့်ခြင်းအတွက် အကြ်ိမ် ၁၂၀၊ Google Assistant အသုံးပြုခြင်းကို ၂၀ စက္ကန့်လျှင် ၅ ကြိမ်၊ တုန်ခါမှုဖြင့် စာတိုအသိပေးခြင်း ပေးပို့ခြင်း အကြိမ် ၂၄၀၊ အသိပေးချက် မပါဝင်သော စာတိုပေါင်း ၄၈၀၊ နာရီကြည့်ခြင်း စက္ကန့် ၂၀ အတွင်း ၂၄ ကြိမ်၊ ဘလူးတူဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့် စက်ကရိယာအသုံးပြု ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းအတွက် ၅ မိနစ်၊ နှလုံးခုန်နှုန်း တိုင်းတာခြင်းအတွက် စက္ကန့် ၃၀လျှင် ၈ ကြီမ်၊ အိပ်စက်ချိန်တွင် ထားရှိသော sleep mode အတွက် ၈ နာရီ၊ နှလုံးခုန်နှုန်းအား စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက် မရရှိသေးပါ။
-	ပုံမှန်ဘက်ထရီတစ်ခုကို မော်ဒယ်ယူ၍ မီတာစားသက်သာသည့် Power Saver mode (OPPO လက်ပတ်နာရီ၏ မော်ဒယ်အားလုံး) တွင် ထားရှိခြင်း : နာရီကြည့်ခြင်းအတွက် ၁၀ စက္ကန့်လျှင် အကြိမ် ၃၀၊ စာတို အသိပေးခြင်း၊ ပြသပေးခြင်းအတွက် ၅ စက္ကန့်လျှင် အကြိမ် ၁၅၀၊ နှလုံးခုန်နှုန်းအား စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ခြေလှမ်းခြေရာခံခြင်းအတွက် မရရှိသေးပါ။
အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော OPPO လက်ပတ်နာရီများအား အားသွင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အသေးစိပ်အချက်အလက်များသည် OPPO စမ်းသပ်ခန်းအတွင်း စမ်းသပ်ချက်ကို အခြေခံ၍ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အားသွင်းနိုင်သည့် အချိန်သည် လက်တွေ့ အခြေအနေအပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ လက်ပတ်နာရီအား အလျှင်အမြန်အားသွင်းနိုင်သော VOOC Flash Charging အတွက် 5V/1.5A adapter (OPPO လက်ပတ်နာရီ 41mm အတွက် 5V/-1A ) သို့မဟုတ် ထိုထက်မြင့်သောအရာ လိုအပ်ပါသည်။
စမ်းသပ်သည့် အခြေအနေ : ပါတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်သည် 25±1°C ဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီသည် သာမာန်အခန်းအပူချိန်သို့ ပြန်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီအားသည် ≥1% ရှိသည်။ App အားလုံးကို ပိတ်ထားပါသည်။ လေယာဉ် စီးနင်းချိန်ထားရှိရမည့် flight mode ကို ပြောင်းလဲထားပါသည်။ GPS ၊ Wi-Fi ၊ NFC ၊ BT နှင့် တုန်ခါမှုအားလုံးကို ပ်ိတ်ထားပါသည်။ 5V/2A adapter နှင့် OPPO လက်ပတ်နာရီ နှင့် OPPO လက်ပတ်နာရီအား အားသွင်းသည့် စံသတ်မှတ်ထားသော စင်ကို အသုံးပြုထားပါသည်။ လက်ပတ်နာရီကို အားသွင်းစက်နှင့် စတင်ဆက်သွယ်သည့်အချိန်တွင် နာရီမျက်နှာပြင်သည် ပိတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ USER ဆော့ဝဲလ်၏ နောက်ဆုံးအတည်ပြုထားသော ဗားရှင်းတွင် အသုံးပြုခဲ့ပြီး ပရင့်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကို ပိတ်ထားပါသည်။
OPPO လက်ပတ်နာရီ 46mm (Wi-Fi ဗားရှင်း) တွင် 5ATM ရေစိုခံစနစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး OPPO လက်ပတ်နာရီ 41mm သည် 3ATM ကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ရေစိုဒဏ်ခံနိုင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သော အသေးစိပ်အချက်အလက်များသည် ISO 22810:2010 ၏ စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက်စံညွှန်းများအတိုင်းဖြစ်ပြီး TÜV SÜD စမ်းသပ်ချက်ကို အောင်မြင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ (နာမည်အပြည့်အစုံမှာ - TÜV SÜD ထောက်ခံချက်နှင့် စစ်ဆေးစမ်းသပ်ချက် (တရုတ်နိုင်ငံ) ကုမ္ပဏီလီမီတက် ရှန်ကျန်း ( Shenzhen) ရုံးခွဲ ) OPPO လက်ပတ်နာရီကို ရေကူးစဉ် သို့မဟုတ် ရေတိမ်သောနေရာတွင်ပြုလုပ်သည့် ရေပေါ်လှုပ်ရှားမှုများဆောင်ရွက်ချိန်တွင် ဝတ်ဆင်ထားနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ရေငုတ်ခြင်း ၊ ရေပူစမ်းတွင် ရေစိမ်ခြင်း၊ ချွေးထုတ်ခန်းတွင် ချွေးထုတ်ခြင်း၊ ဒိုင်ဗင်ထိုးခြင်း၊ ရေအောက်ငုတ်ခြင်း၊ ရေလှိုင်းစီးခြင်းနှင့် အခြားသော ရေနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဖိအားပြင်းသည့် ရေစီးနှင့်ထိတွေ့နိုင်သောကြောင့် လက်ပတ်နာရီအား ဝတ်ဆင်၍ လုပ်ဆောင်ရန်မသင့်တော်ပါ။ ရေစိုခံနိုင်စွမ်းသည် အချိန်နှင့်အမျှ လျော့ကျလာနိုင်ပါသည်။
OPPO လက်ပတ်နာရီသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာ မဟုတ်ပါ။ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေး စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကုသခြင်းများတွင် အသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါ။
Google, Android, Google Play, Wear OS by Google နှင့် အခြားအမှတ်တံဆိပ်များမှာ Google LLC ၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။
အထက်တွင်ပြထားသော လက်ပတ်နာရီမျက်နှာပြင်များမှာ ပုံစံယူဥပမာပေးရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းဓါတ်ပုံများသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်း၏ အသေးစိပ်ဖော်ပြချက်နှင့် အချက်အလက်များသည် ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ အမှန်တကယ် ထွက်ပေါ်လာသည် ကုန်ပစ္စည်းကိုသာ ကိုးကားမှုပြုပါရန်။